Nhau - Ndeapi Iwo Adhijaiti Mafomu Emhepo Anotonhorera
Ndeapi Iwo Iwo ekugadzirisa Mafomu EMhepo Inotonhorera
Zvinoenderana nemamiriro ekushanda, iyo inotonhorera yemhepo inogona kukamurwa kuita echinyorwa murau uye otomatiki mutemo.
1) Iyo yekugadzirisa maitiro maitiro ndeyokugadzirisa mashandiro ekushandisa e fan kana shutter nemaoko mashandiro, sekuvhura nekuvhara fan kana kushandura iyo fan blade angle, kumhanya uye shutter yekuvhura kona kuti uchinje fan fan vhoriyamu. Inoshandiswa zvakanyanya inogadziriswa angle fan (inozivikanwawo senge manual angle fan) uye shutter yemanyorero. Kugadziriswa kwemanyorero kune zvakanakira zvemidziyo yakapusa uye yakaderera yekugadzira mutengo. Asi iyo yemhando yemhando yakashata, haigone kugadziriswa munguva, iyo isingakodzeri kugadzikana kwechigadzirwa (chepakati) mhando. Panguva imwecheteyo, haina kukodzera kuchengetedza simba remhepo. Mamiriro ekushanda ari mashoma kwazvo, iyo impeller inopenyerwa nehubhu bundle, tembiricha yakanyanya kwazvo, nzvimbo yekushanda yakatetepa, uye nguva yekudzima yakanyanya kureba.
(2) Maitiro ekugadzirisa vhoriyamu yemhepo yefeni ndeyekuchinja vhoriyamu yemhepo yeiyo feni otomatiki. Iyo inowanzo shandiswa ndeye otomatiki angle ekugadzirisa mafeni uye otomatiki shutter. Iyo yekushandisa parameter ye fan kana shutter inogona kugadziridzwa yega kana musanganiswa. Hazvina mhosva kuti ndeipi modhiyo yekugadzirisa, inogona kuve yakabatana ne otomatiki chiridzwa kudzora system. Iyo otomatiki kugadzirisa nzira inogona kudzikisira iro basa rekureverera, kuchengetedza kugadzikana kwekushanda, kugadzirisa chigadzirwa chigadzirwa, kugadzirisa mamiriro evashandi uye kudzikisa kushandiswa kwesimba.
Mhepo inotonhorera mhando yemidziyo iyo inoshandisa ambient mweya senge inotonhorera svikiro kutonhodza kana kudzikamisa iyo yepamusoro tembiricha yemvura mupombi. Iine zvakanakira pasina sosi yemvura, inokodzera tembiricha yakakwira uye yakanyanya kumanikidza maitiro mamiriro, hupenyu hwakareba hwebasa uye mutengo wakaderera wekushandisa. Ne kushomeka kwemidziyo yemvura uye simba uye kusimudzira kwekuziva nezve kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, mweya unotonhorera nekuchengetedza mvura, kuchengetedza simba uye kusvibiswa- kwave kuchishandiswa zvakanyanya, Type uye kushandiswa kweplate yemhando inotonhorera mweya